सुकाएर आफनै रजस्वला, भत्काइदिउँ आफ्नै पाठेघर ?
लैंगिक समानताको मुख्यबाधक महिनावारी विभेद हो यो मनुवादी समाजले कहिले बुझ्ने?
"खुलेर बोलौँ । लौंगिक विभेद अन्त्य गरौँ । समतामुलक समाजको सिर्जना गरौँ ।" नेपालमा दैनिक लगभग २ लाख ९० हजार जना महिला तथा किशोरीहरुमा महिनावारी हुने गरेको छ । तर समाजमा प्रचलित धेरै अन्धविश्वासका कारणले गर्दा महिनावारी भएको महिला र महिनावारीको बेलामा बग्ने रगत अशुद्भ भनिएको देखिन्छ । थुप्रै बन्देज एंव निषेध गर्ने व्यवहार मानिसहरुले गर्ने गरेका छन् । जस्तो महिनावारी भएकाले फलफुलका बोट छुनुहुँदैन झर्छ, दही दूध खानुहँुदैन गाई भैंसी थाक्छन्। बुबा, दाजुभाइको अनुहार हेर्नुहुदैन् पाप लाग्छ । अघिदेखि सुत्दै गरेको ओच्छ्यानमा सुत्नुहुँदैन, जुठो हुन्छ। ओढ्ने ओछ्याउने फेर्नुपर्छ, भान्सामा जानुहुँदैन । मन्दिरमा गए देउता रिसाउँछन् जस्ता कुराहरू सबैजसो महिलाहरूले कण्ठ गरेका छन्।
त्यो उचित हो होइन भन्ने पढलेख गरेर उच्च पदमा पुगेका केही महिलाहरू निष्कर्ष निकाल्न सकेको देखिँदैनन् । कतिपय नर्स, डाक्टर, हाकिम भएका महिलाहरू पनि भ्रममा छन् । यसको पहिलो कारण हामीले पढ्दै आएका पाठ्यपुस्तकमा महिनावारीले महत्व नपाउनुले हो। विद्यार्थीलाई गरुले भनेको कुराहरू सबै सत्य हुन्छन् । गलत भए पनि विद्यालयमा भनेकै पत्यार गर्छन्। विद्यालयमा नसिकाउँदा समाजमा भ्रम छ भने ८२ प्रतिशत महिला ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र उनीहरुले महिनावारी व्यवस्थापनका लागि परम्परागत, फोहर, अस्वस्थ र खतरनाक उपाय अपनाउने गरेका छन् ।
यहि भ्रम चिर्न र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनि जनचेता जगाउन सन् २०१४ देखि विश्वभर मनाउन थालिएको यो दिवस सन २०१५ देखि नेपालमा मनाउन थालिएको हो । महिनावारी स्वच्छता दिवस हरेक बर्ष मे २८ तारिखमा मनाइन्छ । नेपालमै पहिलाे पटक महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसरमा सामाजिक न्याय र समताको लागि पहल नेपाल र सारङ्गी न्यूज डटकमको सहकार्यमा एक महिने ‘महिनावारी ः पाप कि प्रतीक’ अभियानको सुरु गरिएको छ । दुई चरणमा एक महिना सम्म संचालन गरिने याे अभियान मे फस्ट अर्थात आज देखी १२ दिन सम्म स्वयम महिलाका महिनावारी पीडालाई समेटीने छ । दोस्रो चरणमा १३ गते देखी २५ गते सम्म नागरीक समाज, सामाजिक अभियान्ता र जनप्रतिनिधी विच छलफल र बहस हुनेछ । २८ गते महिनावारी स्वच्छता दिवसमा वृहद सार्वजनिक बहस गरिने छ । पहिलाे चरणकाे पहिलाे सामाग्री सञ्चारकर्मी तानी थापाकाे 'सुकाएर आफनै रजस्वला, भत्काइदिउँ आफ्नै पाठेघर ? "
अप्रिल २८ राति करिब १० बजे म्यासेन्जरले रातो बत्ती देखायो । म्यासेज हेरें । प्रकाश दाइको रहेछ । ‘महिनावारी स्वच्छता दिवस’ को अवसरमा ‘सामाजिक न्याय र समानताका लागि’ पहल नेपालले सारंगी न्युज डटकमको सहकार्यमा महिनावारी पीडा र अभ्यास अभियानको सुरु गरिएको छ । यसमा तिमीले लेख लेखन ।’ म्यासेजमा लेखिएको थियो । म्यासेज पढें र झस्किए । संयोग नै भनौं दिवस नजिकिँदै गर्दा मेरो महिनावारी पनि हुँदैछ ।
महिनावारी हुँदाको समयमा महिला झनक्क् झन्किनु स्वभाविक हो । सम्बन्धित सामाजिक विषयमा यानिकी महिलाबारे (सामाजिक, संस्कृतिक, राजनीतिक आदि) जति नै लेख लेखिए÷छापिएतापनि छाउपडीले अझै कतिको अकालमा ज्यान लिने हो भन्न सकिन्न । यस्तै सवाल र रिसबीच दाइलाई हस ! म पठाउँछु पर्सि बिहान । भनेर रिप्लाइ गरें ।
उमेर ११ वर्ष २०६७ भदौ महिना त्यतिबेला म कक्षा ७ मा अध्यानरत थिए । शुक्रबारको दिन स्कुलको कपडा सेतो सर्ट र सेतै स्कर्ट त्यही कपडामा कक्षामा म तेस्रो बेन्चमा सरले पढाएको सुन्दै थिए । अचानक फरक तरिकाले मेरो पेट दुख्यो यो दुखाइ मेरो लागि नौलो थियो एकछिन आत्तिए तर चुप लागेर बसे । द्रोसो घन्टि बजेर तेर्सो क्लास सुरु हुनको लागि भजउ को मिस क्लासमा प्रेवश गर्दा थाहा पाए मेरो सेतो स्कर्ट पछाडि पुरै रातो लागेको छ । म लाजले छेउमै बसेकी साथिलाइ पनि केही नभनी चुपचाप टाउको दुखेको नाटक गर्दै घोप्टो परेर सुतिरहेँ ।
क्लासमा सर आउदापनी बिरामी भएको नाटक गर्दै बसिरहे । १ः२० मा छुट्टी भएपछि जब सबै साथि कक्षाबाट घर गए अनि मात्र साथिलाई भने ओए म त मिन्स भएनी ! इपीएचमा पढेको हुनाले म यो बारे जानकारी थिए । पछाडी लागेको दागलाई स्कर्ट अघि सारेर झोलाले छोपी घर तर्फ लागे । करिब स्कुल र घर चार मिनेटको दुरिमा पनि नभएकोले मलाई सहज भयो । सरासर आफ्नो माथी कोठामा गए अनि म संगै आएकी मेरो साथिले मेरो मम्मिलाई बोलाइन । मम्मी हतार हतार गर्दै आउनुभयो मेरो कपडामा लागेको दाग देखेर थोरै मुस्कुराउदै आफ्नो कोठामा गइ प्याड ल्याएर लगाउन सिकाउनु भयो । तर मेरो पहिलो महिनावारी भएको हुनाले मलाई मेरो कोठामा नराखि तल सटर कोठाको भुइमा राखियो । त्यसपछि म बाहिर निस्किन नपाउने भन्दै बाहिर बाट चुक्कुल लगाइयो । बच्चादेखि चरेशको थालमा खाने बानी भएको मलाई रातको खाना म बसेको ठाँउमा ल्याउदै मम्मिले स्टिलको थालमा खा चरेशको थाल छुन हुन्न भनेको अझै याद छ मलाई ।
भाइको कारण तीन दिन मै घाम देँखे
करिब सुत्ने समय भइसकेको थियो म बसेको कोठाको साइडमा मामुको कोठा भएर बोलेको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । भाइ मलाई दिउँसो देखि देख्न नपाएर आत्तिएको रहेछ । खाना एउटै भागमा खाने बानी भएर उ म बिना खाना नखाइ झगडा गरेको सुनेकि थिए । त्यो रात जसोतसो कट्यो शनिबारको दिन ओहो खेल्ने र उफ्रिने बानी भएको बाहिर समेत निस्किन नपाउदा असह्य भएको थियो । तर मलाई कुर्न आएका साथी माडा , चाउचाउ खानेकुरा ल्याउथे त्यसैले उनिहरुसंग गफ गर्दै त्यो दिन कटाउन पनि मुस्किन भएन । फेरि साझ हिजो बेल्काको भाइको झगडा क्रम सुरु भयो सायद त्यसैले होला तिनदिनको दिन मम्मी चारबजे उठाउन आएर नुहाउन लगाइ मलाई मेरो पहिलो महिनावारी भएकोमा चलन अनुसार एउटा टिसर्ट उपहार दिनुभयो र मलाई अब लुक्न पर्दैन भनी त्यतिबेला मिठो खबरपनि सुनाउनु भयो ।
शुक्रबार बिहानबाट मलाई देख्न नपाएको भाइले मलाई देखेर खुशी थियो । आगनमा उ म संग खेलेको देखेर पल्लाघरको आन्टिले ल दिदी यसलाई कति छिटो निकाल्नु भएको भन्दै मेरो मम्मिलाई प्रश्न तेर्साइन । हो क्यारे हुन त तर यसको भाइले मान्दै मानेन दिदी खै भन्दै रोएर हैरान पार्यो त्यसैले यसको लागि भएनी निकाले तीन दिनको दिनमा “
मेरो भाइको कारण महिनावारी हुँदा हप्तै हप्ता वा महिनाभरी लुक्नुपर्ने नियम मेरो लागि बदलिएको थियो । म त्यसपछि सरासर केहि नभए जसरी नै रजस्वल भएको तीन दिन मै घाम देखेर आफ्नो दैनिकी जिवनमा फर्कीसकेको थिए ।
म महिनावारी हुनुमा गर्व गर्छु तर यसलाई पहाड बनाउदिन । प्रकृतिले दिएको अमूल्य वरदान हो यो । १÷२ को भीडमा केही महिलामात्र रजस्वला हुँदा हो त मलाई पनि नौलो लाग्थ्यो होला तर यो प्रकृतिक प्रक्रिया हो हरेक महिलामा हुन्छ ।
म ११ वर्षको हुँदा मेरो पहिलो रजस्वला भएको हो । यसैबाट मेरो नयाँ जीवन सृजनाको भयो । एउटा नारी जीवनको सौभाग्यतिर हिँडे । थाहा छ ! रजस्वल हुँदा बग्ने रगतले मेरो कोखमा नयाँ जीवन हुर्किन सक्छ तर तबमात्र जब मलाई कुनै पुरुषको सहायता मिल्छ । यदि ऊ साथ छैन भने नारी सौभाग्य महसुस गर्ने भाग्य मेरो कहाँ हुनु र !
कहिलेसम्म हामी नारी महिनामा ४ दिन अछुत बनेर बस्नुपर्ने ? आखिर कहिलेसम्म हामी नारीले छाउपडीको नाउँमा ज्यान गुमाउने ?
र महिनावारी हुनुको घमण्ड तोड्न मन लाग्छ
सौभाग्यबीच पनि असह्य पीडा हुन्छ रजस्वलाको समय । गह्रौ शरीर, कपडा निचरेर जस्तै निचरिने पेट, बेलाबेला लाग्ने बिना कारणको भोक, झन्नक उठ्ने त्यो रिस, बदलिएको मेरो शारीरिक नियमले मलाई शारीरिक पीडासँगै मानसिक तनाव पनि दिन्छ । मेरो जस्तो पीडा हरेक नारीलाई हुन्छ । फरक यत्ति हो कुनै अपवाद बाहेक म मेरो पीडा खुलेर पुरुष साथीसँग भन्न सक्छु । उनीहरुसँग लाज नमानी प्याड किन्न सँगै पुग्छु । उनीहरुसँग खुलेर रजस्वला हुँदा पेट दुखकोे पीडा भन्छु, रजस्वला हुने पालो नि नाघिसक्यो भन्दै भलाकुसारी गर्छु । यो मलाईमात्र हुने कुरा होइन हरेक नारीको प्राकृतिक कुरा हो त्यसैले नलजाई भन्ने गर्छु ।
तर समाजले यही कुरा पचाउने सामथ्र्य अहिलेसम्म राख्न सकेको छैन । कहिलेसम्म हामी नारी महिनामा ४ दिन अछुत बनेर बस्नुपर्ने ? आखिर कहिलेसम्म हामी नारीले छाउपडीको नाउँमा ज्यान गुमाउने ?
हर साझ विहान मैले बत्ती बाल्दा शुभ हुन्छ भन्ने समाजले रजस्वला हुँदा अशुभको ट्याग किन टासिदिन्छ ? जुनबेला शरीरलाई थप पोषण र आहारको जरुरत हुन्छ तब हामीलाई भान्छा कोठामा रोक लगाइन्छ किन ? शरीरमा तागत नहुँदा चिसो भूईमा ज्यान फालेर सुत्नुपर्ने कहिले सम्म ? जुनसमय बढी स्याहार र सफा वातावरण चाहिएको हुन्छ तब हामीलाई थोत्रो टालाटुलीसित कुनै कुनामा फालिन्छ । समाजमा हुने सबै प्रकारका हिँसा मुक्ती र स्वच्छ वातावरण्मा बाच्न पाउने नेपालीकोे संधिान प्रदत्त मौलिक हकको हन्न होइन ? किन यो धाराले महिलालाई छुदैन् ?
लैंगिक समानताको मुख्यबाधक महिनावारी विभेद हो यो मनुवादी समाजले कहिले बुझ्ने?हाम्रो जस्तो धारण राखे के हुन्छ ? हामीलाई थाहा छ समाजले धर्ममा उल्लेख नै नभएको नियमलाई आड लिँदै हाम्रो सोचलाई घोडालाई लगाम लगाए जस्तै लगाम कसिदिएका छन् । र यही बेला हाम्रो महिनावारी हुनुको घमण्ड तोडिन्छ । अनि सम्झिन्छु उनै प्रिय आख्यानकार, कवि प्रगति राईको कविताशँ
मन्दिर धाउने भक्तहरु
बम खेलाउने खेलाडीहरु
यी दुबैको समर्पणमा
सुकाइदिन्छु आफनै रजस्वला
भत्काइदिन्छु आफ्नै पाठेघर
र यो संसारलाई ठप्प रोकिदिन्छु
मन्दिरमा ओइलाएको फूल देख्नु भन्दा
युद्धमा रोइरहेक नानीहरु देख्नु भन्दा
यो चलिरहेको संसार ठप्प रोक्नु
कम अपराध लाग्छ मलाई ।
बुधवार, बैशाख १८, २०७६, ०६:०५:००
दैलेखमा जिप दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते (घाइतेकाे सुचिसहित)